Ardayda Soomaalida ee South Africa ayaa ka qeybgalay barnaamij hido iyo dhaqan ah oo lagu qabtay South Afria. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Ardayda Soomaalida ee South Africa ayaa ka qeybgalay barnaamij hido iyo dhaqan...
Ardayda Soomaalida ee South Africa ayaa ka qeybgalay barnaamij hido iyo dhaqan ah oo lagu qabtay South Afria.
Arday walba waxaa ay soo bandhigayeen hidaha iyo dhaqanka dalkooda sida cunnada ay dhaqan ahaan leeyihiin,dharka dhaqanka oo ay xertaan ,cayaaraha hidaha iyo dhaqanka iyo wax waliba oo ay lasoo shirtagi karaan si ay u muujiyaan in ay ka dhax muuqdaan dhaqamada kala duwan ee halkaasi lagu soo bandhigayay.
Dhalinyarada ka socotay in ay soo bandhigaan hidaha iyo dhaqanka Soomaalida ayaa goobta soo galay waxaana durbadiiba is qabsaday sawan iyo sacab muujinayay in lagu soo dhaweynayo kooxda soo gashay masraxa waxaa ay ahaayeen afar wiil iyo afar gabdhood oo kusoo labistay dharka iyo hidaha dhaqanka Soomaalida kadibna waxaa ay halkaasi kusoo bandhigeen cayaaro iyo hido dhaqan ah.
Inta aysan garoonka soo galin waxaa maqr qura loo aamusay in lagu tacsiyeeyo dadkii ku dhintay qaraxii waxuushnimada ahaa ee kooxda shabaabku ku gumaadeen shacabka Masaakiinta ahaa 14-kii bishaan isgoyska Zoobe.
Suldaan Ibraahim qaxwo waa muwaadin Somaali ah oo inta badan xil iska saaray ilaalinta dhaqanka Soomaalida kaalin weyna ka qaata marka timaado barnaamijyada noocaan oo kale Radio muqdisho waxaa uu u sheegay cunooyinka ay soo bandhigeen maanta ay aad u jecleysteen dad waynahii kasoo qeybgalay isla markaana la dhameystay.
Markii ay soo dhamaatay cayaarta ayaa guddiga garsoorka ee qiimaynayay dhaqamada kala duwan kooxaha soo bandhigayay waxaa ku dhawaaqeen natiijada cayaarta waxaana Soomaaliya ay soo gashay kaalinta labaad.
Waxaa Sido Kale Soomaaliya ay kaalmo ugu horeeya ka heshay qurxinta iyo diyaarinta waxaa ay ka haleen kaalinta kowaad,cayaarta ay soo bandhigeeen kaalinta labaad halka sido kale kaalinta labaad ay ka galeen dharka iyo hidaha iyo dhaqanka.
Links-ka Muuqaalka halkaan kala daga:
Cabdullahi Maxamuud Amiin.
Previous articleGuddoomiye Jawaari iyo wefdi uu hoggaaminayo oo u amba baxay Dalka Suudaan “Sawirro”
Next articleShirka Madaxda Dowladda Federaalka ah iyo kuwa Dowladd Goboleedyadda oo Maanta Muqdisho ka furmayo.